အဓိကပါဝါ:55-75 KW အဆင့်သုံးဆင့်
စွမ်းရည်:3000-5000 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
ကြီးမားသောစွမ်းရည် ရှိ၍ တစ်နာရီလျှင် ၁-၈ တန်အထိထုတ်လုပ်နိုင်သောကျွဲနွားအစာကြိတ်စက်၏စွမ်းရည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှကမ်းလှမ်းသောကျွဲနွားအစာကြိတ်စက်များသည်အမျိုးမျိုးသောကျွဲနွားအစာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။,ကြက်စာ,ဝက်အစာကျွေးခြင်းနှင့်သေးငယ်သောနှင့်ကြီးမားသောစွမ်းရည်အတွက်အခြားမွေးမြူရေးအစာ. ဒီအမျိုးအစား ကြီးမားသောအစာကျွေးလုံးလေးများကြိတ် တကယ်တော့ လုံးတောင့်ကြိတ်စက်လက်စွပ်.ဤမွေးမြူရေးအစာကျွေးစက်များတွင်ကြိတ်ခွဲစက်များအားအစာကျွေးခြင်းနှင့်မြေပြင်ပစ္စည်းများသည်ဝက်အူပို့စက်များဖြင့်ရောနှောခြင်းသို့ပြောင်းသည်။. ဤနှင့်အခြားအစာကျွေးသောကြိတ်ခွဲစက်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကြွယ်ဝ။ အာဟာရရှိသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအာမခံသည်။. ring die pellet စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်တစ်နာရီလျှင် ၈၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်. Die type Pellet Machine ကိုမြည်ရန်ရည်ညွှန်းခြင်း, အဆိုပါလုံးလေးများ roller နှင့်လက်စွပ်နှစ် ဦး စလုံးဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးပေါ်တွင်လည်ပတ်သေဆုံးလျက်ရှိသည်. အတောင့်ကြိတ်စက်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်အနားများသည်သေမျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ တူညီသောအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်. အဘယ်သူမျှမခုန်ကျော်သွားပြီဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လက်စွပ်၏သက်တမ်းသေလုံးလေးကြိတ်၏အသက်တာပြားချပ်ချပ်အမျိုးအစားထက်အများကြီးပိုရှည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်.
တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းစက်ရုံရှိကျွဲနွားအစာကြိတ်စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာအစာကြိတ်စက်ဖြစ်သည်, အစာကျွေးစက်, တောင့်စက်ကိုအစာကျွေးပါ, တောင့်တောင့်အအေးစက်ကိုကျွေးမွေးနှင့်လုံးလေးထုပ်ပိုးစက်ကိုအစာကျွေး. အရန်မွေးမြူရေးအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိရိယာများသည်စက်ကိုသယ်ဆောင်နေသည်, ထိန်းချုပ်မှုကက်ဘိနက်, သိုလှောင်မှုပုံးများ, ဖုန်စုပ်စက်, မီးဘေးကာကွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်အစရှိသဖြင့်၊.
သင့်လျော်သောကျွဲနွားအစာကြိတ်စက်ကိရိယာများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အစာအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်, အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်. အစာကြိတ်ခွဲစက်ကိရိယာများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအမျိုးအစား (၄) မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်: ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ခေါ် -in ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအစီအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်သင့်သည်. ဤသည်ဝက်ဝံ၏ချောဆီအရည်ကြည်ထားရှိရေးလိမ့်မည်, အစာတောင့်ကြိတ်စက်၏ပစ္စည်းအပိုပစ္စည်းများကိုအစားထိုးခြင်း၊, နှင့်ဂီယာသေတ္တာများထဲမှာရေနံအဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးနေ.
ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲစက်များအတွက်အစာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများပါဝင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်ပျက်ကွက်ဖို့ဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ၏အစားထိုးအဖြစ်, လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့်အခြေအနေများသို့မဟုတ်အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းများအပေါ်အခြေခံသည်, ဒါကြောင့်သင့်လျော်သောအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်သေချာစေရန်.
ကျွဲနွားကျက်စား MiLL ပစ္စည်းစက်၏အင်္ဂါရပ်များ
accurate တိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်းအစာကျွေးရန်အာမခံသောတိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ်ခွဲစက်ကိရိယာများကိုသံမဏိအစာကျွေးခြင်းနှင့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှတင်သွင်းသော Danfoss အင်ဗာတာအဆောက်အအုံများတပ်ဆင်ထားသည်.
◊၎င်းသည်အပြည့်အဝသံမဏိအေးစက်နှင့်အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ကြီးမားသောပွင့်လင်းဝင်ရောက်ခွင့်တံခါးကိုချမှတ်သည်. အေးစက်အတွင်းပိုင်း, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ရှိပါတယ် 304 သံမဏိလှော်များနှင့်လှော်ရိုးတံ, ၎င်းသည်မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အစာတောင့်များ၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးနိုင်သည်. single-conditioner မွေးမြူရေးအစာကြိတ်စက်နှင့် Double-conditioner အစာကြိတ်ခွဲစက်များရှိသည်. တစ်မျိုးတည်းသောအအေးပေးစနစ်သည်ကြက်ဘဲအစာတောင့်များအတွက်ဖြစ်သည်, နှစ်ဆအေးစက်အမျိုးအစားကပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံးလေးများပြုလုပ်နိုင်သည် (ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းလည်းပိုမိုမြင့်မားသည်).
◊သံမဏိအစာကျွေးခြင်းပိုက်, တံခါးအဖုံးနှင့် scaleboard, အရာလှပသောနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်ကြ၏.
◊ကောင်းမွန်သောဂီယာအချိုးအစားရရှိရန်အတွက်လက်စွပ်ဖြင့်သေကျေနေသောတိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ်ခွဲစက်များတွင် dual-motor V-belt drive ကိုအသုံးပြုသည်, မြင့်မားသောမောင်းနှင်အား, တည်ငြိမ် transimmison, အဓိကရိုးတံရှည်ဝန်ဆောင်မှု, ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်.
main Main shaft နှင့် main case ၏ support အင်္ကျီလက်များသည် occlusion ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကြေးဝါချုံဖြင့်စီထားပြီး disassembly လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်.